Iinkcukacha ezithe kratya zePixelmator Pro ngaphambi kokumiliselwa kule vidiyo | Ndisuka mac
Namhlanje sifunde kwividiyo, iindaba ezingakumbi zenguqulo yokugqibela yePixelmator Pro.Ingcaciso esiyifumanayo malunga nesoftware entsha evela kubaphuhlisi Pixelmator iza kuthi idrophe. Phambi kwehlobo saxelelwa ukuba into entsha "iyaphekwa," kunye nekhethini ebomvu yeqonga ekujongwe ukubonisa inxenye yenkqubo. Kwiiveki ezidlulileyo, sidibene iinkcukacha zokuqala de IPixelmator Pro. ewe, ngomyalezo wokugqibela "Ndizakufika oku kuwa" kwaye namhlanje bathumele ividiyo enezinto ezintsha kwiphepha.
Into endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku sisakhiwo esitsha. Iiphalethi zomsebenzi odadayo ziyanyamalala, ukuze zingeniswe ngokuthe nkqo kwinxalenye yesicelo. Kwaye ukuqhubeka nemisebenzi yenxalenye, olu lwakhiwo lukhumbuza iinkqubo ezininzi zokuhlela iifoto, ezinjengeFotohop. Nangona kunjalo, Uyilo lojongano kunye noyilo lweqhosha luyamangalisa. Oku kusikhumbuza kakhulu usetyenziso lweApple. Kwelinye icala, imisebenzi kunye namaqhosha kulula ukufumana nokusebenza. Kwaye kwelinye, lisebenzisa amaqhosha afanayo ngaphezulu Yabelana kunye noMhloli, Eziza neenkqubo ezinjengeeFoto okanye iiFinal Cut Pro X ngazo.
Kwiwebhusayithi yesicelo, sinokufumana zonke iintlobo zemisebenzi, ezinye zirhuqiwe ukusuka kuguqulelo 3 lwePixelmator. Endaweni yoko, kwividiyo sibona indlela iPixelmator Pro eyisebenzisa ngayo imisebenzi ye-macOS. Umzekelo, ukubuyela kwakhona kwifoto kwindawo eyadlulayo. Ukwenza oku, ujongano olufana noMatshini weXesha luvula. Kuhlala kubonakala ukuba uya nyhani kwiTime Machine okanye ujonge iinguqulelo esinazo kwiMac yethu.Olunye uphawu ngumsebenzi woKwabelana, uzuze ilifa ngendlela efanayo, kwezinye iinkqubo zeApple. Ngaphakathi, iPixelmator Pro iya kuzisebenzisa zonke izibonelelo zeApple, ezinjengeMetal 2.
Umbono opheleleyo wePixelmator Pro uyamangalisa. Inika umbono wokuba bafuna ukuvala isikhewu esishiyekileyo. Okwangoku asikwazi ukuqhubela phambili imihla yokuhamba, kodwa sinethemba lokukubona kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iinkcukacha ezithe kratya zePixelmator Pro ngaphambi kokumiliselwa kule vidiyo